Kutyora Kwaunoita Kuroora kweMweya kuburikidza neRunamato minamato | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Maitiro Ekudambura Mweya Muchato kuburikidza Nekununura Minamato
Maitiro Ekudambura Mweya Muchato kuburikidza Nekununura Minamato
Isaya 49: 24-25:
24 Ko iye ungabvisirwa zvakapambwa kune vane simba, Kana nhapwa yomutemo inganunurwa? 25 Asi zvanzi naIshe, Kunyange navarwi veanesimba vachatorerwa, zvakapambwa zveanotyisa zvichadzikunurwa, nekuti ini ndichapokana naiye anokakavara newe, uye ndichaponesa vana vako.
ZveMweya muchato mubatanidzwa usiri mutsvene pakati pemurume kana mukadzi ane mweya wedhimoni munzvimbo yemweya. Iyi mweya yemadhimoni inouya ichizivisa nezve varume vemweya nemweya yemweya. Zvemuchato zvemweya chiteyeso chechidhimoni chakagadziriswa kuisa avo vanobatwa mudenderedzwa rekutadza. Nhasi tichave tichitarisa nzira yekukanganisa muchato wemweya kuburikidza minamato yekununura. Kubatana kusingamiriri Mwari muhupenyu hwako kuri kukanganisa hupenyu hwako kuchaiswa nhasi muzita raJesu.
Vazhinji vanhu vasina mhosva nhasi vanobatwa nemichato yemweya, uye izvozvo zvinosanganisira maKristu mazhinji. Vatendi vazhinji nhasi havagone kuroora kana kuroorwa nekuda kwekuwirirana vakadzi vemweya nevarume vemweya. Vazhinji vavaita zvepabonde muchiroto uye nezvimwe zvechidhimoni muhope nekuda kwekubatana uku kwemweya. Madhimoni ari shure kwemuchato wemweya mweya yakasindimara uye anogona kukandirwa kunze nekutenda kwakaoma, kuburikidza neminamato yekununura.
Sezvatinotarisa munzira yekuputsa muchato wemweya kuburikidza neminamato yekununura, tichave tichiongorora simba rekunamatira nzira yako kubva mune chero mamiriro. Munamato ndiwo musimboti wekununurwa kwako kubva mukubata kwese kwadhiabhori. Jesu akatiraira munaMako 16: 18-20 kudzinga mweya yakaipa uye michato yemweya inokonzerwa nemadhimoni. Tinogona kudzinga madhimoni kuburikidza neminamato yekununura, tinokwanisa kudzinga dhiabhori rese iro rakatibata takasungwa munyika yemweya. Kubudikidza nesimba reminamato yekununura, tinogona kukunda masimba evarume vevadzimu nemweya yemweya pamusoro pehupenyu hwedu. Kubudikidza nesimba reminamato yekununura, tinogona kuzvisunungura kubva kunhaurwa yega yega yemweya nemasimba emadhimoni. Sezvo iwe uchiita minamato iyi yekununura nhasi, ini ndinokuona iwe wakasununguka zvakakwana muzita raJesu.
20 Zviratidzo Zvekuti Uri Mukadzi Wemuchato Wemweya?
Iwe unoziva kuti uri mhombwe yemweya wekuroora uye kuti iwe unofanirwa kuzvinunura pachako paunoona zviratidzo zvinotevera muhupenyu hwako.
1. Kunetseka kwewanano
2. Kuita zvepabonde muzviroto
3. Ruvengo rwekuroora
4. Kuve wakakwenenzverwa
5. Chikanganiso chisingaregererwe chebonde
6. Zvisarudzo zvisina kunaka
7. Kusiyiwa uye kusiiwa nemurume kana murume kana murume
8. Dhimoni reroto rubatsiro
9. Kuhukura kana kuona rwizi muchiroto
10. Kutadza kuenda kumwedzi muhope
11. Kuita nhumbu muchiroto
12. Kuyamwisa mucheche muchiroto
13. Kudzosera mucheche muchiroto
14. Kuve nemhuri muchiroto
15. Kutenga nemurume / mukadzi muchiroto
16. Kuona murume akarara nedivi reroto
17. Kuvengwa nemurume wepanyika
18. Zvinetso zvakakomba zvegynecological
19. Kuita bumbu mushure mekurota zvepabonde
20. Kurota michato
Iye zvino zvaunenge uine nzwisiso yekuti ungatyora sei muchato wemweya kuburikidza neminamato yekununura, ngatiendei takananga kuminamato. Ndinokukurudzira kuti unamate iyi minamato yekununura nekutenda nhasi uye uzvinunure kubva kune yega roorano yemweya muzita raJesu. Ndiri kukuona warambwa nadhiyabhori nemoto nezita raJesu
1.Mweya murume / wemweya mukadzi, ndisunungure nemoto, muzita raJesu.
2. Weseomweya murume / mukadzi, ini ndinokuramba neropa raJesu.
3. Mukadzi wese wemweya / murume wemweya wega wega, anofa, muzita raJesu.
4. Zvese zvawakachengeta muhupenyu hwangu, buda nemoto, muzita raJesu.
5. Simba rese ririkushanda kumuchato wangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.
6. Ini ndinorambana uye ndinoramba muchato wangu nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.
7. Ini ndinotyora zvibvumirano zvese zvakapinda nemweya wemurume kana mukadzi, mune
8. Ini ndinoraira kutinhira moto waMwari kuti upise kumadota gown remuchato, rin'i, mafoto uye zvimwe zvese zvinoshandiswa pamuchato, muzita raJesu.
9. Ini ndinotumira moto waMwari kupisa kumadota chitupa chewanano, muzita raJesu.
10. Ini ndinotyora zvibvumirano zveropa rega-rega uye mweya-wakasungwa nemweya murume kana mukadzi, muzita raJesu;
11. Ini ndinotumira kutinhira moto waMwari kuti utsve kuita madota vana vakazvarwa kumuchato, muzita raJesu.
12. Ini ndinobvisa ropa rangu, mate angu kana chero chimwe chikamu chemuviri wangu chakaiswa paatari yemweya wemurume kana mukadzi, muzita raJesu.
13. Iwe wemweya murume kana mukadzi anotambudza hupenyu hwangu uye kuroora kwepanyika ini ndinokusunga necheni dzinopisa uye nezvisungo zvaMwari uye ndinokudzingira kunze kweupenyu hwangu mugomba rakadzika; uye ndinokuraira kuti usazombouya muhupenyu hwangu zvakare, muzita raJesu.
14. Ini ndinodzoka kwauri, pfuma yako yese iri yangu iri mumweya
Nyika, kusanganisira kuchaya uye chero chakashandiswa kumuchato nezvibvumirano, muzita raJesu.
15. Ndinozvibvisa pane zvese zvakaipa zvakaiswa mumuviri wangu nekuda kwehukama hwedu hwepabonde, muzita raJesu.
16. Ishe tumira moto weMweya Mutsvene mudzi wangu uye ugopisa zvinhu zvese zvisina kuchena zvakaiswa mariri nemurume wemweya kana nemuzita, muzita raJesu.
17. Ini ndinotyora musoro wenyoka, ndakaiswa mumuviri wangu nemurume wemweya kana mukadzi kuti andiitire zvakaipa, uye ndiraire kuti ibude, muzita raJesu.
18. Ndinogeza, neropa raJesu, zvese zvakashata zvakaiswa mudumbu mangu kuti zvinditadzise kuita vana pasi.
19. Ishe, gadzirisai uye mudzorere kukuvadza kwese kwakaitwa kune chero chikamu chemuviri wangu uye kuroora kwangu kwepanyika nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.
20. Ini ndinoramba uye ndinodzima kutuka kese, kududza zvakaipa, kuperetera, jinx, humwari uye incantation yakaiswa pandiri nemurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.
21. Ndinotora ndotora zvinhu zvangu zvese zvepanyika zviri mumaoko emurume wemweya kana mukadzi, muzita raJesu.
22. Ndinoraira murume wemweya kana mukadzi kuti afuratire ini nekusingaperi, muzita raJesu.
23. Ini ndinoramba uye ndinoramba zita randakapihwa nemweya murume kana mukadzi, muzita raJesu.
24 Naizvozvo ndinoparidza uye nekureurura kuti Ishe Jesu Kristu ndiye murume wangu nekusingaperi, muzita raJesu.
25. Ndinozvinyudza muropa raJesu uye kudzima chiratidzo chakashata kana zvinyorwa zvakaiswa pandiri, muzita raJesu.
26. Ndakazvisunungura kubva panhare, simba rinosimbisa uye kusungwa kwemweya wemurume kana mukadzi, muzita raJesu.
27. Ini ndinoremedza kure kure simba rekushandisa uye basa raishandiswa kudzikamisa imba yangu yepanyika uye kunditadzisa kubereka vana kumurume kana mukadzi wepasi pano, muzita raJesu.
28. Ndinozivisa kumatenga kuti ini ndakaroora nekusingaperi kuna Jesu.
29. Shambadziro yega yega yemuchato yakaipa, zunungurwa kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
30. Zvese zvakaipa zvinonyorwa, zvakanyorwa nepeni yedare, ngazvipwe neropa raJesu.
31. Ini ndinounza ropa raJesu mumweya usingade kuenda, muzita raJesu.
32. Ini ndinouya neropa raJesu pane humbowo hwese hunogona kushandurwa nemweya yakaipa inondirwisa.
33. Ini ndinosvitsa kupokana-kusheedzera kumatenga vachipokana nemuchato wese wakashata, muzita raJesu.
34. Ini ndinoramba kupa chero humbowo hungashandiswa nemuvengi kundirwisa, muzita raJesu.
35. Ratidziro dzasatani ngadziparadzwe neropa raJesu.
36. Ini ndinokuparidzira iwe mumweya mukadzi / murume kuti hapana nzvimbo yako muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
37. O Ishe, ndiitire mota inonunura.
38. Ini ndinouya nerutendo kugomo reZiyoni. Ishe, raira kununurwa pahupenyu hwangu ikozvino.
39. Ishe, ndipe mvura kubva kumvura yaMwari.
40. Ngwarira kukomberedzwa kwemuvengi pasi, muzita raJesu.
41. O Ishe, chengetedza Iko kufarira kwako muhupenyu hwangu.
42. Zvese zvakanyorwa pamusoro pangu mukutenderera kwemwedzi ngazvidzimwe muzita raJesu.
43. Zvese, zvakarongedzwa muzuva, mwedzi nenyeredzi zvichindirwisa, ngazvibviswe, muzita raJesu.
44. Chese chinhu chakasarudzika chakarongedzwa mumajini angu, ngavadzimwe neropa raJesu.
45. O Ishe, zunzai mwaka wekutadza uye kuvhiringidzika kubva muhupenyu hwangu.
46. ​​Ini ndinoputsa mutemo wese wakaipa, unoshanda ndichirwisa hupenyu hwangu, muzita raJesu.
47. Ndinoronga nguva itsva, mwaka nemutemo unobatsira, muzita raJesu.
48. Ndinotaura kuparadza kumizinda yamambokadzi wegungwa neyezizi, muzita raJesu.
49. Ini ndinotaura kuparadzwa kudzimbahwe remweya weIjipita uye kupururudza maatari avo, muzita raJesu.
50. Ndinotaura kuparadza kuaritari, kutaura zvinopesana nechinangwa chaMwari cheupenyu hwangu, muzita raJesu.
51. Ini ndinozviratidza semhandara yaIshe, muzita raJesu
52. Vheiri rose rakaipa riri muhupenyu hwangu ngarivhurwe, muzita raJesu.
53. madziro ese ari pakati pangu nekushanya kwaMwari, ngaaputswe, muzita raJesu.
54. Rega zano raMwari ribudirire muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
55. Ini ndinoparadza simba re chero mbeu yedhimoni muhupenyu hwangu kubva mudumbu, muzita raJesu.
56. Ndinotaura kugedhi rangu rembilical kudzingira mweya yese yevabereki yakaipa, muzita raJesu.
57. Ini ndinotyora joko remweya, nekuwana kumasuwo angu ekubereka, muzita raJesu.
58. O Ishe, nguva yenyu yekuvandudzwa ngaiuye pandiri.
59. ndinounza moto kubva paatari yaIshe pamuchato wese wakashata, muzita raJesu.
60. Ini ndinodzikunura neropa raJesu kubva kumitezo yega yebonde, muzita raJesu.
61. Ini ndinodzima kunyorwa kwezita rangu pane chero zvakaipa zvinyorwa zvemuchato, muzita raJesu.
62. Ini ndinoramba uye ndinoramba chero zvakaipa zvemweya muchato, muzita raJesu.
63. Ini ndinobvuma kuti Jesu ndiye mukadzi wangu wekutanga uye ane godo pamusoro pangu.
64. Ini ndinoburitsa gwaro rekurambana kumweya mumwe nemumwe mukadzi / murume, muzita raJesu.
65. Ini ndinosunga mumweya mumweya / murume wemukati nemaketani asingaperi, muzita raJesu.
66. Rega chapupu chekudenga chikunde uchapupu hwese hwegehena, muzita raJesu.
67. O Ishe, chiisai kurangarira kwangu misungo ipi neipi yemweya uye chibvumirano.
68. Ropa raJesu ngandichenese pazvinhu zvose zvinosvibisa, muzita raJesu.
69. Rega mweya / murume wemweya awire pasi afe, muzita raJesu.
70. Rega vana vako vese vakanamatira kwandiri vawira pasi uye vafe, muzita raJesu.
71. Ndinopisa zvitupa zvako uye ndinoparadza zvindori zvako, muzita raJesu.
72. Ini ndinotonga kumweya yemvura uye ndinoparidza kuti makachengeterwa zvisungo zvisingaperi murima, muzita raJesu.
73. O Ishe, rwai nevanopokana neni.
74. Ruzivo rwese rwemweya yemvura, ngavazununguke kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
Previous nyayaPfungwa dzeMunamato Kubva Kudonha Mukuyedzwa
inoteveraKuporesa minamato Yechirwere cheshuga
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Uyo anofarira kufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.
Appiah Simon weori May 14, 2020 Pa 3: 34 pm
Ndinoziva munamato uyu uchandibatsira pamusoro peiyi yakaipa kusangana Amen
Jackie Hopkins Ato May 20, 2020 Pa 2: 54 pm
Ini ndinonamata kuti Mwari vandiite ndisingaonekwe kumweya wemurume
Juliet Olerkie Yakah May 27, 2020 Pa 3: 06 am
Pls ndinamatire ini ndine muchato wemweya uye ndiri kusungwa juru nguva dzese, varume vanongoda kutora mukana kwandiri uye parutivi pekuti ini ndine fibroid uye ndaenda kunoitwa oparesheni 3years uye yakatanga kukura zvakare uye ndave kusekwa munharaunda medu
ghislain Ndira 21, 2021 At 12:55 am
kwazisa vanhu vazhinji kuvatsvakira chaunga chaJesu uye vasingatendi muna Jesu Kristu
Jennifer June 9, 2020 Pa 4: 45 am
Ini ndinozivisa hupenyu hwangu hwakasununguka muzita raJesu ane simba
Sheila Chikunguru 17, 2020 Pa 4: 18 am
Ini ndinotaura hupenyu hwangu hwakasununguka muzita raJesu
Esther Chikunguru 27, 2020 Pa 6: 27 pm
Ndiri kufara uye ndinotenda kuna Mwari nekundisunungura kubva kumurume wemweya uyu \_ mukadzi… Ameni
RICHARD Nyamavhuvhu 9, 2020 Pa 10: 40 am
ndinonamata kuti Ishe wakanaka nemwanakomana wake jesus vandiponese uye vandisunungure kubva muhusungwa hwomweya hwese
Sandra Gumiguru 21, 2020 Pa 8: 04 am
Ndiri kutenda muna Mwari kuti vandisunungure kubva kumurume wemweya. Ndaneta.
Ayoosu Nancy Zvita 11, 2020 Pa 5: 57 pm
Ndiri kufara chaizvo kuva nemunamato uyu, ndave ndasununguka kubva kumurume wemweya, ndinoshuva kuti uteedzere chirongwa ichi pasocial media, asi usazive mafambiro acho
Mary May 13, 2021 Pa 11: 55 pm
Hola quisiera saber cuáles fueron tus vivencias para determinar q eras víctimas de esta situación me ocurre algo muy extraño también nosé conquien hablarlo gracias agradecería tu colaboración.
Esther Zvita 14, 2020 Pa 9: 04 pm
Ndatenda zvikuru Munhu waMwari, I belive am free In Jesus. (Ameni)
Enam Fiamaple Zvita 15, 2020 Pa 9: 55 am
Ndatenda zvikuru munhu waMwari. Mwari vakukomborere
Baaba Zvita 19, 2020 Pa 6: 29 pm
Ndinotenda ndakasununguka muzita raJesu
Nervine Asava Zvita 25, 2020 Pa 7: 05 pm
Ndataura uyu munamato 🙏 Ini ndinotenda ndasunungurwa muzita dzvene raJesu kubva mukusungwa kwemurume wemweya muzita raJesu !!!!!
JOY GABY Ndira 8, 2021 At 2:14 am
Je suis très heureux aujourd'hui avec ma famille. Mon nom est Gabby vivant aux Etats-Unis, mon mari m'a quitté depuis 3 bonnes années maintenant et je léime tellement, je cherchais un moyen de le récupérer depuis lors. Ndino rondedzero yemibvunzo isingashandiswi, hazvibvumirwi, uye hazvibvumirwi kutenderana neVAPOROFITA ​​PAPA, vachida rubatsiro, vachizopa rubatsiro rwemari mumashure memasvondo maviri. . Mon mari et moi vivons heureux ensemble aujourd'hui, Cet homme est génial, iwe pouvez le contacter par e-mail (popeprophet@gmail.com). Consenant, je conseillerai à toutes les personnes sérieuses qui se sont trouvées dans ce genre de problème de le contacter maintenant une solution rapide sans stérilité .. Il toujours bonjour, maintenant je l'appelle mon père. Contactez-le maintenant is an toujours en ligne par courriel (popeprophet @ gmail. Com) or contactez-le sur sa ligne mobile WhatsApp (+ 2).
Stan Ndira 16, 2021 At 8:21 am
Ndokumbira mundinamatirewo nemusikana wangu nekuti ane zviratidzo zvekuroora / kusungwa pamweya… ndinonamata kuti Mwari vamununure kubva kumweya yese / kubatana kwakashata kuitira kuti imba yedu iitike.
Elizabeth Ndira 22, 2021 At 8:47 am
Ndasununguka muzita raJesu ndichazvara ndakabudirira muzita raJesu amen
NABBOSA JULIET Kukadzi 3, 2021 Pa 9: 04 am
Pokuah felicia Kukadzi 7, 2021 Pa 10: 30 am
Ndinodudza wangu akasunungurwa kubva kumurume wechibereko muzita raJesu. Ini ndiri pokuah kubva kuGhana ndanga ndakatarisana nemuchato uyu wepashure kubva muchidimbu ndapota ndirangarireiwo muminamato
Selina Akrokoh Kukadzi 13, 2021 At 8:20 pm
Ini ndinosunungura ndakasununguka kubva kuhuroyi hwaSatani muzita raJesu Kristu. Ini ndinounza kutonga pane chero murume wemweya. Ini ndinokanda chero murume wemweya necheni yakasimba kwazvo inopisa inotumwa naMwari muzita raJesu. Ini ndakaroora nekusingaperi kuna Jesu Kristu. Ameni
Samuel rombo rakanaka Kukadzi 16, 2021 Pa 12: 39 am
Ndokumbira mundinamatirewo, ndine mukadzi wemweya uye ane godo uye akaipa, ndinotenda neu ur kubatsira minamato ndinenge ndasununguka kubva kumukadzi wemweya i Jesu zita Amen
Joseph Kurume 16, 2021 Pa 2: 40 am
Mwari akuropafadzei changamire nekiyi kiyi yekunamatira yakasimba, uye ngaarambe achikuzorodzai nekuzodza kwake zvakanyanya ameni
Solo Kurume 29, 2021 Pa 9: 32 pm
Ndinonamata kuti Ishe akanaka andinunure kubva kumukadzi wangu wemweya
Fred Kubvumbi 6, 2021 At 1:21 am
Ndatenda zvikuru nemunamato uyu Changamire.
Ini ndinoburitsa husiku huno kubva kune zvese zvisungo zvemweya uye ndinokutendai Ishe nekudzorerwa kwakauya kumuchato wangu muzita raJesu. Ameni !!!!!
Rute Kubvumbi 12, 2021 At 3:36 am
Jennifer Kubvumbi 25, 2021 At 6:22 am
Ndapota ndinoda minamato yako. Ndiri kusangana nemweya wemuchato
Okello Simon peter Kubvumbi 25, 2021 Pa 9: 31 pm
Muzita raJesu Wemasimbaose… ..ndakanunurwa pamwe nehama dzangu nehanzvadzi muboka rimwechete rekutambudzwa. Ameni
Anosike Anselem Ebiweni June 18, 2021 Pa 9: 40 pm
Uye ishe vapindura minamato yangu muzita raJesu Simba ndinonamata Amen.
Munamato wekuporesa Kurwara Kunoshamisa Kurwara
20 Hondo dzeMunamato Pfungwa dzeDziviriro uye Dziviriro
Pfupi Munamato Rebetsero
30 Akanaka Minyengetero yeMangwanani